Soo dejisan Pou 1.4.67 – Vessoft
Soo dejisan Pou
Pou – kulan ah oo caan ah si uu u daryeelo xayawaankaaga ah. In ciyaar aad u baahan tahay si aad u daryeesho fayo-qabka, caafimaadka, gaajo iyo tamarta ee xayawaanka ah. Pou awood u u ciyaaro kulan, taas oo aad u baahan tahay si ay u ururiyaan lacagta birta ah oo aad cunto iyo dhar ah oo cusub soo iibsan karta in xayawanka. Kulankaan ayaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan falalka soo socda la xayawaanka, sida in ay ku quudiyaan, ku dhaq, u hurdo, dharka, iwm socon Pou taageertaa awood u leeyahay inuu la saaxiibo ciyaaro iyo raad horumarinta xayawaannada ay.
Ilaalinta fayo-qabka, caafimaadka, gaajo iyo tamarta ee xayawaanka
Awoodda in ay ciyaaraan ciyaaraha
Taageerada awood u leeyahay inuu ciyaaro saaxiibada
Pou Software la xiriira: